ဘောဂဗေဒ - Howling Pixel
ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကုန်ကျငွေ နှင့် စွမ်းရည်
↑ Economics။ Merriam-Webster။
↑ (2008) The Foundations of Positive and Normative Economics: A Handbook. Oxford University Press. ISBN 0-19-532831-0။
↑ (2010) 21st Century Economics: A Reference Handbook Volume 1. SAGE Publications, 8. ISBN 978-1-4129-6142-4။
↑ (1888) The Economics of Industry. Macmillan, 2။
↑ Jevons, William Stanley (1879). The Theory of Political Economy, second, Macmillan and Co, XIV။
↑ Samuelson, Paul A. (2004). Economics. McGraw-Hill. ISBN 978-0-0728-7205-7။
↑ Economics of Education။ The World Bank (2007)။
↑ Iannaccone, Laurence R. (September 1998). "Introduction to the Economics of Religion" 36 (3).
↑ Nordhaus, William D. (2002). "The Economic Consequences ofaWar with Iraq", War with Iraq: Costs, Consequences, and Alternatives. Cambridge, Massachusetts: American Academy of Arts and Sciences. ISBN 0-87724-036-1။
↑ Diamond၊ Arthur M., Jr. (2008)။ Science, Economics of။ The New Palgrave Dictionary of Economics။ DOI:10.1057/9780230226203.1491။
↑ TowardsaGreen Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. United Nations Environment Programme. 2011.
ကုန်စည်ဆိုသည်မှာ ဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်တွင် အသုံးဝင်သည့် မည်သည့် အရာဝတ္ထု သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။
ရုံးအဆောက်အအုံနှင့် စက်ကိရိယာစသည်တို့မှာ စားသုံးသူမှ တိုက်ရိုက်သုံးစွဲ၍ မရသော်လည်း တဆင့် ပြန်လည် ရောင်းချလျှင် တန်ဖိုးရှိသည့် အတွက် ကုန်ပစ္စည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။
ကုန်စည်မှာ အကောင်အထည် ပြ၍ ရနိုင်သော ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက် အကောင်အထည် ပြ၍ မရနိုင်သော ပစ္စည်းကို ဝန်ဆောင်မှု ဟု ခေါ်သည်။
လေကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများမှာ အသုံးဝင်သောလည်း အခမဲ့ ရနိုင်သည့် အတွက် အခမဲ့ ကုန်စည်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။
ဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်တွင် ငွေကြေးဖောင်းပွခြင်း၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်း ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုတို့၏ယေဘူယျ ကုန်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်းကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေဘူယျ ကုန်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာသောအခါတွင် ငွေကြေးပမာဏ တစ်ခုသည် ပို၍နည်းသော ကုန်စည်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာ ဝယ်ယူနိုင်ပေတော့မည်။
ကုန်ဈေးနှုန်းတက်၍ ငွေ၏ဝယ်အား လျော့ပါးသွားရသည့်အခါ ငွေတန်ဖိုးကျလာသည်။ ထိုအခါ ငွေထုထည်၏ တန်ဖိုးသည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ တန်ဖိုးမရှိတော့ဘဲ သူသည်သာ ဖောင်းပွလျက် တန်ဖိုးက မူကား နည်းပါးနေသည့် သဘောဖြင့် တင်စား၍ သုံးသည်။ ငွေများများနှင့် ပစ္စည်းနည်းနည်း ဝယ်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ စစ်ပြီးကာလ၌ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာသည် လုပ်ခနှုန်းတက်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းထွက် ဆုတ်ယုတ်ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ငွေကြေးဖောင်းပွခြင်း ဖြစ်ခဲ့ကြရ၍ နည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဖြေရှင်းကြရသည်။ ကုန်ဈေးနှုန်းများမှာ စစ်မဖြစ်မီကထက် များစွာ တက်ကျန်ခဲ့လေသည်။ နိုင်ငံတိုင်းသည် မိမိတို့ငွေတန်ဖိုး ကျစ်လစ်မြင့်တက်အောင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို အားသွန်ကြိုးစားကြသည်။
စတီဗင် စမေးလ် (အင်္ဂလိပ်: Stephen Smale) ( (1930-07-15)ဇူလိုင် ၁၅၊ ၁၉၃၀ ဖွား) သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသား သင်္ချာပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ တိုပေါ်လော်ဂျီ (topology)၊ ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားစနစ်များ (dynamical systems) နှင့် သင်္ချာဘောဂဗေဒ (mathematical economics) ဆိုင်ရာ သူ၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများကြောင့် ထင်ရှားသည်။
'စုစုပေါင်း' ဟု ဆိုရာတွင် မတည်ပစ္စည်း၏ အလျော့တွက်တန်ဖိုးကို ထည့်သွင်းမထားချေ။ တန်ဖိုးလျှော့ကာ အသားတင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသုံးပြီး စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မဟုတ်ခဲ့လျှင် အသားတင်ပြည်တွင်း ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်မည်။ ဤညီမျှခြင်း၏ စားသုံးမှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့မှာ အပြီးသတ် ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုတို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ် ဖြစ်လေသည်။ ညီမျှခြင်းတွင် ထုတ်ကုန် အနုတ် သွင်းကုန်ပိုင်း (တစ်စတစ်စ တိုးလာသော ထုတ်ကုန်ဟုလည်း ခေါ် လေ့ရှိ) တွင် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုမဟုတ် (သွင်းကုန်) ဟူသည့်အပိုင်း၌ နုတ်ယူညှိချပြီး ပြည်တွင်း ထုတ်လုပ်မှု ပြည်တွင်း၌ မစားသုံး (ထုတ်ကုန်) ဘဲပြန်တင်ပို့သည့်ကိန်းတွင် ပေါင်းထည့်လိုက်ပါ။ စီးပွား ရေးပညာရှင်များ (ကိန်း ခေတ်မှစ၍) သည်အထွေထွေစားသုံးမှုကို နှစ်ပိုင်းခွဲ၍ စဉ်းစားလိုစိတ် ရှိကြသည်။ ပုဂ္ဂလိက စားသုံးမှုနှင့် ပြည်သူပိုင် ကဏ္ဍ (အစိုးရ) အသုံးစရိတ်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ မက်ခရို စီးပွား ရေးလေ့လာမှု ပညာတွင် စုစုပေါင်းစားသုံးမှုကို ဤသို့ သဘောတရား ရေးရာ ခွဲခြား ခြင်း၌
-အတွင်းမှ ပေါ်လာသော ပုဂ္ဂလိကစားသုံးမှုမှ ဖယ်ထုတ်လိုက်လျှင် အစိုးရအသုံးစရိတ်ကို ပြင်ပသုံးစရိတ်အဖြစ် ပြနိုင်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် မက်ခရို စီးပွားရေး လေ့လာမှုဘောင်အတွင်း ကွဲပြားသည့် အစိုးရအသုံးစရိတ်အဆင့်များကို စဉ်းစား၍ ရနိုင်သည်။
တောင်ငူတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ တောင်ငူခရိုင်နှင့် အနီးအနားရှိ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ဝိဇ္ဇာ၊သိပ္ပံနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ ဘွဲ့များနှင့် မဟာဘွဲ့သင်တန်းများကို သင်ကြားပေးနေသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ထရမ့်သည် ရီပါဘလစ်ကန်ပါတီ၏ သမ္မတလောင်း အဖြစ် ဝင်ရောက်အရွေးခံမည်ဟု ကြေငြာခဲ့ပြီး ၎င်းပါတီ၏ သမ္မတလောင်း အဖြစ် အရွေးချယ်ခံမည့်သူများတွင် ရှေ့မှ ပြေးနေခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလတွင် ရီပါဘလစ်ကန် ပါတီရှိ ၎င်း၏ ပြိုင်ဘက်များမှ မဲဆွယ်နေမှုများကို ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လတွင် ၂၀၁၆ ရီပါဘလစ်ကန် အမျိုးသား ကွန်ဗန်းရှင်းမှ ၎င်းအား ရီပါဘလစ်ကန် ပါတီအား ကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်မည့် သမ္မတ လောင်း အဖြစ် တရားဝင် ကြေငြာခဲ့သည်။ ထရမ့်သည် ယခင်က မကြုံဖူးအောင် မီဒီယာ၏ အရေးစိုက်မှုကို ခံခဲ့ရပြီး နိုင်ငံတကာ၏ အာရုံစိုက်မှုကိုလည်း ခံခဲ့ရသည်။ အင်တာဗျူးများ၊ တွစ်တာ နှင့် မဲဆွယ်ပွဲများတွင် ပြောကြားခဲ့သော စကားများမှာ အငြင်းပွားစရာ စကား သို့မဟုတ် အမှားများ ဖြစ်သည်။ ရီပါဘလစ်ကန် ပါတီ အတွင်း သမ္မတလောင်း အဖြစ် အရွေးခံရစေရန် ပြုလုပ်သော မဲဆွယ်ပွဲအချို့တွင် ဆန္ဒပြမှု သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုများဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်တွင် ထရမ့်မှ အမျိုးသမီးများအား အဓမ္မ ဖက်နမ်းခြင်း နှင့် ဖျစ်ညှစ်ခြင်း ပြုလုပ်သည်ကို ဝါကြွားပြောဆိုသော အသံဖိုင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး အမျိုးသမီး အများအပြားမှ ၎င်းတို့အား ထိုသို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ထိုအသံဖိုင် ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းမှ ၂၀၀၅ ခုနှစ် တွင် ပြောဆိုခဲ့သော စကားများကို တောင်းပန်ခဲ့သော်လည်း စွပ်စွဲမှုများကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်း စေရန် လုပ်ဆောင်သော ကန်ပိန်း၏ တစိတ်တဒေသမျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ထရမ့် မဲဆွယ်ရာတွင်ပြုလုပ်သော စည်းရုံးမှုများတွင် အမေရိကန်-တရုတ်တို့၏ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီမှု နှင့် နက်ဖ်တာ နှင့် ထရန် ပစိဖိတ် ပါတနာရှစ် သဘောတူညီချက် အစရှိသော ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီမှုများကို ပြန်လည် ညှိနှိုင်းမည်၊ အမေရိကန်-မက္ကဆီကို နယ်စပ်တွင် တံတိုင်းကာရံခြင်း အပါအဝင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေများကို တင်းကြပ်သွားမည်၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတို့၏ အခွင့်အရေးများကို ပြန်လည်ပြုပြင်မည်၊ တတ်နိုင်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဥပဒေကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီး အသစ်ပြန်လည် ရေးဆွဲသွားမည်၊ အခွန် လျှော့ချမည် စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာလ ပါရီ တိုက်ခိုက်မှု အပြီးတွင် ထရမ့်မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ မူစလင်များ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုကို ယာယီတားမြစ်ရန် ပြောဆိုခဲ့ပြီး နောင်တွင် ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်သော ရာဇဝင် ရှိသည့် နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံသားများကိုသာ ရည်ရွယ်ကြောင်းနှင့် အကြမ်းဖက်သမား ဖြစ်လာမည့် သူများကို စစ်ဆေးခြင်း တိုးတက်လာသည့် အချိန်အထိ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အသက် ၇၀ နှင့် သမ္မတ ဖြစ်လာသောကြောင့် သမ္မတ အဖြစ် ပထမ သက်တမ်း တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် သူများတွင် အသက် အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး ရော်နယ် ရေဂင်၏ ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် အသက် ၆၉နှစ်၌ အသက်အကြီးဆုံး သမ္မတ အဖြစ် ပထမအကြိမ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စံချိန်ကို ချိုးခဲ့သည်။ သီအိုဒိုး ရုစဗဲ ပြီးလျှင် နယူးယောက်မြို့တွင် မွေးဖွားသော ဒုတိယမြောက် သမ္မတ ဖြစ်သည်။
မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (အင်္ဂလိပ်: Monywa University of Economics) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေး၊ ဘောဂဗေဒနှင့် စာရင်းအင်းပညာများအတွက် ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီနှင့် ဒီပလိုမာ၊ မဟာဘွဲ့ သင်တန်းများကို သင်ကြားပေးနေသည်။
ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် (Yangon University of Economics) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အထင်ကရ စီးပွားရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု တက္ကသိုလ် ဖြစ်သည်။ ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် ဌာန တစ်ခုအဖြစ်သာ စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် သီးခြားလွတ်လပ်သော တက္ကသိုလ်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီနှင့် ဒီပလိုမာ၊ မဟာဒီဂရီများကို စီပွားရေး၊ ဘောဂဗေဒနှင့် စာရင်းအင်းပညာများကို အချိန်ပြည့်/အချိန်ပိုင်း ပို့ချလျက်ရှိသည်။ ရန်ကုန် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ပရဝုဏ် သုံးခုသည် ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ လှိုင်မြို့နယ် နှင့် ရွာသာကြီးတို့တွင် အသီးသီးတည်ရှိကာ ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ပရဝုဏ်မှာ ပင်မပရဝုဏ်ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော တက္ကသိုလ် ဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှ၏ အစောဆုံး တက္ကသိုလ်များတွင်လည်း ပါဝင်သည်။
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ပြည်လမ်းမကြီးဘေး စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တိုင်အနီးတွင် တည်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော ပညာရေးတက္ကသိုလ် ဖြစ်သည်။
ဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်တွင် ဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ ကိုင်တွယ် ထိတွေ့၍ မရသော ကုန်စည်ကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းဖြင့် စားသုံးသူ ကိုယ်တိုင်ကို ဖြစ်စေ (ဥပမာ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း)၊ စာသုံးသူ ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းကို ဖြစ်စေ (ဥပမာ မော်တော်ကားပြင်ခြင်း)၊ စားသုံးသူ ပိုင်ဆိုင်သော ဥစ္စာပစ္စည်းကို (ဥပမာ စတော့ရှယ်ယာများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း) ဖြစ်စေ တနည်းတဖုံ ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။
ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းအား ကွာခြားမှုနှုန်း (Purchasing power parity သို့ PPP) မှာ နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ၏ နှိုင်းရ ကုန်ဈေးနှုန်း အပေါ်တွင် မူတည်၍ ကာလအရှည်ကြာ အသုံးပြုနိုင်သော ငွေလဲနှုန်းကို တိုင်းတာသည့် ညွှန်းကိန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထို အိုင်ဒီယာမှာ ၁၆ ရာစု ဆလာမန်ကာ ကျောင်းတော်မှ အစပြုခဲ့ပြီး ယနေ့ခေတ်တွင် ဂူစတပ်ဗ် ကပ်ဆယ်လ်က ၁၉၁၈ ခုနှစ်တွင် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုနှုန်းထားမှာ ကုန်ဈေးနှုန်း တစ်ခုတည်း ဥပဒေသ (law of one price) ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ဖော်ထုတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုအိုင်ဒီယာမှာ ရောင်းဝယ်ရာတွင် ကုန်ကျသည့် ငွေပမာဏနှင့် ကုန်သွယ်ရာတွင် ရှိနေသည့် တားမြစ်ချက်များကို ထည့်တွက်မထားပေ။ တူညီသော ကုန်ပစ္စည်းများသည် ကွာခြားသော ဈေးကွက်များတွင် ကြားခံငွေကြေးတစ်မျိုးတည်းဖြင့် တိုင်းတာပါက ဈေးနှုန်း အတူတူ ရှိနေလိမ့်မည်ဟု ယူဆထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သမဝါယမတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း)သည် ၊သမဝါယမ ဦးစီးဌာန၊စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
သမဝါယမတက္ကသိုလ် (သန်လျင်)သည် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ရန်ကုန်မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် (၈)မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး၊ သန်လျင်မြို့ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်းမကြီး၏ အရှေ့ဘက်၊ ရန်ကုန်သီလဝါမီးရထားလမ်း အရှေ့ဘက်နှင့် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်၏ အနောက်ဘက် ညောင်သုံးပင်ရွာတွင်တည်ရှိပြီး၊ သမဝါယမ တက္ကသိုလ်ပိုင် မြေဧရိယာ စုစုပေါင်းမှာ (၂၀၈.၂၀၉)ဧက ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ၊သမဝါယမ ဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
သမဝါယမတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် နှစ်စဉ်ပထမနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၄၀၀)ဦး လက်ခံသင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။